Izisombululo zaManzi oMbane zaNkunkuma - iShanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
Ukucocwa kwamanzi amdaka kwimizi-mveliso kugubungela iindlela kunye neenkqubo ezisetyenziselwa ukunyanga amanzi angcolileyo ngandlela thile yimizi-mveliso ye-anthropogenic okanye yezorhwebo ngaphambi kokuba ikhutshelwe kwimeko-bume okanye iphinde isetyenziswe.
Uninzi lwamashishini luvelisa inkunkuma emanzi nangona imeko yakutshanje kwilizwe elihambele phambili ibikukunciphisa imveliso okanye ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma ngaphakathi kwinkqubo yemveliso. Nangona kunjalo, amashishini amaninzi ahlala exhomekeke kwiinkqubo ezivelisa amanzi amdaka.
Isixhobo se-BOQU sijolise ekubekeni iliso kumgangatho wamanzi ngexesha lenkqubo yokunyanga amanzi, ukuqinisekisa iziphumo zovavanyo ngokuthembeka okuphezulu kunye nokuchaneka.
2.1. Indawo yoNyango lwamanzi eNkunkuma eMalaysia
Le yiprojekthi yonyango lwamanzi amdaka eMalaysia, kufuneka balinganise i-pH, i-conductivity, i-oksijini enyibilikileyo kunye nobunzima. Iqela le-BOQU laya apho, labonelela ngoqeqesho kwaye labakhokela ukuba bafake umhlalutyi womgangatho wamanzi.
Umzekelo No Uhlalutyo
I-pHG-2091X I-pH Analyzer ekwi-Intanethi
I-DDG-2090 Uhlalutyo lokuSebenza kwi-Intanethi
Inja-2092 I-Oxygen Analyzer ye-Oxygen ekwi-Intanethi
I-TBG-2088S Umhlalutyi weTurbidity kwi-Intanethi
Ikhowudi yeC3G-3000 Isicazululi seCOD esikwi-Intanethi
I-TPG-3030 Kwi-Intanethi iyonke i-Phosphorus Analyzer
2.2. Indawo yokuNyanga amanzi amdaka eIndonesia
Lo Matshini woNyango lwaManzi yiKawasan Industri eJawa, umthamo umalunga ne-35,000 yee-cubic metres ngemini kwaye unokwandiswa ukuya kwi-42,000 yeekyubhiki mitha.
Kufuneka unyango lwamanzi
Inlet amanzi amdaka: Turbidity ikwi-1000NTU.
Phatha amanzi: i-turbidity ingaphantsi kwe-5 NTU.
Ukubeka iliso kwiiparameter zoMgangatho waManzi
Inlet amanzi amdaka: pH, turbidity.
Amanzi okuphuma: i-pH, ukungabi namandla, i-chlorine eseleyo.
1) Yonke idatha kufuneka ibonise kwiscreen esinye.
2) Ukubuyisela ukulawula impompo ye-dosing ngokwexabiso le-turbidity.
MPG-6099 Isinxibelelanisi esineempawu ezininzi kwi-Intanethi
I-ZDYG-2088-01 Isinxibelelanisi sedigriji yedijithali ekwi-Intanethi
I-BH-485-FCL Intsalela ekwi-Intanethi eseDijithali eseleyo
BH-485-PH Idijithali ye-pH ye-Intanethi